Maamulka Gobolka Banaadir oo xoojinaya isku xirka Bulshada iyo Hay’adaha amniga – Radio Daljir
Maamulka Gobolka Banaadir oo xoojinaya isku xirka Bulshada iyo Hay’adaha amniga
Juunyo 17, 2019 3:49 b 0
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Mudane Cabdirixmaan Cumar Cusmaan (Eng.Yarisow) ayaa kulan gaar ah oo Amniga Caasimadda lagu xoojinayo la qaatay Maamulka Degmada Howl-Wadaag.
Guddoomiyaha ayaa ka dhageystay Maamulka warbixino kala duwan oo la xiriira amniga iyo dib u dhiska Degmada Howl-wadaag oo haatan ku socoto dar-dar.
Eng Yariisoow ayaa kula dardaarmay maamulka degmada iyo laamaha amniga in la xoojiyo sugida nabadgalyada deegaanka iyo in la horumarinyo isku xirka shacabka iyo hey’adaha ammaanka.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ugu danbeyn kormeeray waddada Ceel Garweyne oo dib-u-dayactir lagu sameeyay. Waxuna ku boggaadiyey bulshada deegaanka howlaha IsxilQaanka ee lagu dhisayo Caasimadda.